Yeyona 10 Ipesenti yokugqibela | Martech Zone
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ubuncinci sikhuphe ukukhutshwa kokusebenza okutsha kwisicelo sethu kunye nokudityaniswa kwethu. Ngelishwa, sineeprojekthi ezimbalwa ezaqalwa, kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo ngaphambi kokufika kwam engekakulungeli ukuveliswa. Ayilotyala leqela, kodwa ngoku luxanduva lwam ukufikelela kwimveliso.
Akukho mbuzo wokuba ndineqela elifanelekileyo kunye netekhnoloji elungileyo. Kodwa i-90% yomsebenzi sele yenziwe ixesha elide kakhulu.
Nasi isicwangciso sokufumana ngaphezulu kwe-10% yokugqibela:
Yenza abaphuhlisi bakho babonise ukusebenza.
Utshintsho lwesicelo soxwebhu luxhomekeke kwinkcukacha kwaye ufumane ukwamkelwa kwiqela lokuba kutheni kufuneka kwenziwe olo tshintsho.
Fumana isivumelwano malunga nokuba utshintsho luya kugqitywa nini ngu.
Cwangcisa umboniso olandelayo.
Yiya kwinyathelo 1.
Nje ukuba iprojekthi ilibaziseke, umngcipheko ngokwenyani uyonyuka ukuze iphinde ilibaziseke kwakhona. Kwimisebenzi edlulileyo, ndikhe ndeva ukuncwina xa umhla wokugqibela uphulwe… kuba uthenga ixesha elingakumbi lokuwugqiba. Abasebenzi bahlala befuna ukwenza umsebenzi omkhulu kwaye abaphuhlisi ngakumbi bathanda ukubonisa italente yabo.
Besinedemo ngeveki okanye edlulileyo engakhange ihambe kakuhle kakhulu. Abaphuhlisi babonakalise kade, baqala isicelo ngesandla kunye nesicelo sabo (inkohliso), emva koko intengiselwano yasilela. Xa isilele, kwathi cwaka. Nokuthula okungakumbi. Kwaye ezinye. Sithethile ngezisombululo ezinokubakho emva koko sayivala ngembeko le demo.
Emva kwedemo, ndathetha nomphathi wophuhliso kwaye wandiqinisekisa ukuba iprojekthi igqityiwe ngama-90%.
Ndimcacisele ukuba i-90% ithetha i-0% kwintengiso. I-90% ithetha ukuba iinjongo azifezekiswanga. I-90% ithetha ukuba izinto ezilindelweyo kunye nabathengi azifezekiswanga. Ngelixa ndivumayo ukuba i-90% sisininzi somsebenzi, ayisiyompumelelo de kube kugqityiwe i-10%. Oko kongeza ukuya kwi-100% ngendlela;).
Kule veki, siphinde sayibona le demo kwaye yayiyinto entle. Ngoku sithatha imveliso yokugqibela kwaye ndiqinisekile ukuba siza kuyikhupha kwiiveki ezizayo xa sizinikele kubaxhasi bethu. Ndazisa amaqela ukuba mkhulu kangakanani umsebenzi abawenzileyo kwaye siwuxabise kangakanani umsebenzi. Ayisiyo i-homerun… eya kuba xa silungile kwimveliso kodwa iziseko ngokuqinisekileyo zilayishiwe.
Ezinye iingcebiso ezongezelelweyo:
Soloko kuvunyelwene ngexesha elibekiweyo.
Emva kotshintsho lweemfuno, phinda uvavanye ixesha elifanelekileyo kwaye uze kwisivumelwano kwakhona.
Cwangcisa umboniso ngexesha elininzi lokuba iqela lizilungiselele.
Misela okulindelweyo kulo mboniso. Yazisa iqela ukuba unemincili!
Beka iqela ngokukhululekileyo uyazi ukuba iingxaki zinokuvela, unethemba lokuba abayi kuzenza.
Yiba nenkxaso, sukulinda ukusilela emva koko uhlasele.
Ukudumisa esidlangalaleni, gxeka ngasese.
Musa, phantsi kwazo naziphi na iimeko, usebenzise umboniso njengethuba lokukhuthaza ngeentloni. Uya kukhuthaza kuphela abadwelisi benkqubo yakho ukuba bafune umsebenzi!
Khumbula ukuba i-10% yokugqibela yeyona inzima. Yeyokugqibela iipesenti ezili-10 ezenza kwaye ziqhawule ishishini. Ukucwangciswa, ukulungiswa kunye nokwenziwa kwi-10% yokugqibela kuya kuwenza wonke umahluko.
tags: umanyanisokwinkqubo yokubambisanacbskubloga kwequmrhuIinkcukachaUFrank Daleudliwanondlebeamadili endawoUkuthengisaSherpaku vumela
Jan 8, 2008 kwi-11: 08 AM
Iposti enkulu. Ndicinga ukuba unyanisile i-10% yeyona inzima.